Dubartiin Itoophiyaa Sa’udii Arabiyatti daa’ima wowworaantee du’aaf saaxilte du'aan adabamte: Lammiin biroos AK tti ajjeefame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Dubartiin Itoophiyaa Sa’udii Arabiyatti daa’ima wowworaantee du’aaf saaxilte du’aan adabamte: Lammiin biroos...
Dubartiin Itoophiyaa Sa’udii Arabiyatti daa’ima wowworaantee du’aaf saaxilte du’aan adabamte: Lammiin biroos AK tti ajjeefame
Lammiin Itoophiyaa biroos hate jedhame Johaanisbarg, Aafrikaa Kibbaatti dhagaan tumamee ajjeefame
Dubartiin lammii Itoophiyaa ,Kadiijaa Muhaammad Iisaa, magaalaa Hafar al-Batiin, Kaaba-baha Sa’udii Arabiyaatti du’aan adabamte, akka ibsa Saudi press Agency itti. Sababni Kadiija morma kuttaan lubbuu isii dhabdeef, akka ibsa Ministera Haajaa Biyyakeessaatti, daa’ima woggaa 3 lammii biyya Sa’udii bakka rafutti si’a 30 cuupheen woraantee du’aaf waan saaxilteef. Erga daa’ima woworaantee booda mana gadi lakkiftee yaalii baqachuu gootus guutummatti milquuf hinmilkoofne.
Kadiija hojjattuu manaa turte. Maaltu akka ajjeechaa kanaaf akka isii kakaase hinbeekamne. Jireenyi hojjattoota biyya Sa’udii keessa jiraatanii hedduu hadhaayaa akka ta’e yeroo garagaraatti dubbatamaa fi barreeffamaa tureera.
Kadiijaan dabalatee, bara kana keessatti namoota 78 kan Sa’udii keessatti adabbii du’aan lubbuu isaanii dhaban. Hawaasni addunyaa yaaddoo adeemsa seera biyyatti irratti qabu dhageessisuu irra ufhinqusanne; itti milkaayuu dhabus.
Oduma wolfakkaatuun lammiin Itoophiyaa tokko hiriyyoota isaa sadi biroo wojjiin duukkaana saame jedhame dhagaan rukutamee ajeefame. Namni kuni lubbuu isaa kan dhabe kibba Johaanisbarg bakka Meeyfeer jedhamutti. Kunis kan ta’e jiraattonni naannoo sanii, namoonni saamamne jedhan, lammii Itoophiyaa kana erga barbaadanii arganii booda. Barbaadanii arginaan seera harka isaaniitti fudhachuudhaan rukuttaa gara jabbeennaan reeban- ni rukutan, dhagaa itti daddarbatan. Egaa kana booda kan lubuun isaa darbite.
Lubbuun lammi Itoophiyaa kuni bahuu poolisiin Aafrikaa Kibbaa (AK) mirkaneessee, ta’us hanga ammaatti namni too’annaa jala oole hinjiru. Ajjeechaa kanaan wolqabatee poolisiin qorannoo irra jirachuunis himameera.
Ajjeechaa kana booda Komishiiniin Mirga Dhalanamaa Aafrikaa Kibbaa wolgahii naannoo sanitti waamee ture. Jibbaan AK keessa jiru jibbaa namoota biyya alaa irraa dhufanii ‘xenophobia’ osoo hintaane jibbaa namoota biyyoota Aafrikaa biraa irraa dhufanii ‘afrophobia’ ta’uus dubbate. Kanaafis ragaan namoonni biyya biraa irraa dhufan garuu bifaan adii ta’an rakkoon wolfakkaataan kan isaan hinqunnamne waan taaneef.
Bara 2008 Aafrikaa Kibbaa keessatti jibbaa lammiiwwan biyyaa hangi tokko baqattoota AK jiraatanii irratti agarsiisaniin baqattootaa fi qabeenya isaanii irratti balaa heddu qaqqabsiisanii turan. Yeroo sanitti namoonni kuma heddutti laakkawaman qe’ee isaanii irraa buqqa’an, qabeenya isaaniis saamaman. Kan ajjeefamanii fi kaniinn miidhaan qaamaa irra gayes danuu ture. Ammas gara yaadannoo fokkataa sanitti biyyattiin akka deebitee hinmucucaanne kan Komishiiniin Mirga Dhalanamaa AK sodaatu.
hojjattoota sa'udi arabiyaa
lammii itophiyaa aafrikaa kibbaatti ajjeefame
morma kuttaan ajjeesuu
Previous articleDawaan ulfa ittisu kan dhiiraa hojjatamuuf deema
Next articleAmnesty International Itoophiyaan kan hidhaman akka gadilakkistu, mormitootas burkuteessuu akka dhaabdu gaafate